ဆီးရီးယားအရေးကို မေ့လျော့ထားလျှင် ကပ်ဘေးဆိုက်နိုင်
ပို့စ်တင်ချိန် - 3/14/2014 09:38:00 PM
၀ါရှင်တန်၊ မတ် ၁၃
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးက ပြောကြားရာတွင် ၎င်းတို့ အနေဖြင့် ယူကရိန်းမှလ ဒုက္ခသည်များ ကိုင်မီးယားဒေသမှ ထွက်ပြေးလာလျှင်ကူညီရန် အသင့်ရှိကြောင်း သို့သော် ၎င်းအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဆီးရီးယားအရေးကို မေ့လျော့ထားလျှင် ကပ်ဘေး ဖြစ်လာနိုင်မည်ကို စိုး ရိမ်မိသည်ဟု ကုလ သမဂ်္ဂ ဒုက်္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး အကြီးအကဲ အန်တိုနီရိုဂတ်တိုနီရိုက ပြော ကြားခဲ့သည်ဟု မတ်လ ၁၃ ရက်က ရိုက်တာ သတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းက ၀ါရှင် တန်သို့ ဆီးရီးယားဒုက္ခသည် အကျပ်အတည်းကိစ္စရပ်ကို ဆွေးနွေးရန်ရောက်ရှိနေစဉ် ပြောကြားခဲ့ရာတွင်
“ပြီးခဲ့တဲ့လက ဂျီနီဗာဆွေးနွေးပွဲ မအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဆီးရီးယားအရေး ဖြေရှင်းရန် အမေရိကန်နဲ့ ရုရှတို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေက အတော် နှေးကွေးသွားပါတယ်။ ယခု ယူကရိန်းကိစ္စရပ်ပါ ပါဝင်လာတော့ ပို ဆိုးရွားလာစေပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဆီးရီးယားငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ကြိုးပမ်းဖို့လိုအပ်နေချိန်မှာ ယူကရိန်းကိစ္စရပ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အတွက် အခက်တွေ့ စေပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့အရေးကိစ္စတွေမှာ တာဝန်အရှိ ဆုံးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ဆီးရီးယားအရေးကို မေ့လျော့ထားခြင်းသည် လည်း ကပ်ဘေးသို့ ဆိုက်နိုင်ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါတယ်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ၀ါရှင်တန်နှင့် မော်စကို တို့ကြားတွင် တင်းမာမှုများသည် ရုရှက ယူကရိန်းပိုင် ကရိုင်းမီးယားဒေသကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် အဆိုး ရွားဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
အာဖရိက မြောက်ပိုင်း သည် အယ်လ်ခိုင်ဒါ ပေါက်ဖွားရာ အ...
ကြေးနီ စီမံကိန်း အနီး တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မ...
DVB - ရဲတပ်ရင်းဆောက်လုပ်ဖို့ သိမ်းယူလယ်ယာမြေတွေပြန...
အချစ်က သရဲနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒန်ကြယ်စင်သွယ်နဲ့ တွေ...
AIDS ရဲ့ ဂယက် (၂)
သံသယများ နှင့် Mister University Myanmar ပြိုင်ပွဲ...
ယခုနှစ်သင်္ကြန်ပွဲတော် ယာဉ်တိုက်မှုလျော့ နည်းစေရန် ယာ...
ကမ္ဘာ့အမျိုးသမီးများနေ့ အပြီး ရှမ်းအမျိုးသမီးငယ်မျာ...
၁ ပတ်အတွင်း B ပိုး လုံးဝပျောက်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း
မျက်ကွင်း ညိုခြင်း ကို သက်သာ စေမည့် နည်းလမ်း ကောင်း
ဂျိုင်းတွေဖြူနေအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ?
ပထမဆုံး Wi-Fi စနစ်ပါဝင်သော စမတ်အဲယားကွန်းမော်ဒယ်သစ...
ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူခြင်းနှင့် ပံ့သကူ ၀က်ပ...
KIA မှ ဂွမ်မော်အား အင်ဘန်လ က အကျယ်ချုပ်ချထား
သံလွင်မြစ်ကို ဒုက္ခမပေးဖို့ ဒေသခံတွေ ပြောပြီ
သံလွင်မြစ်ပေါ် တည်ဆောက်မည့် ရေကာတာများ ရပ်ဆိုင်းရန်...
သာကေတမြို့နယ်တွင် လူငယ်အချင်းချင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ရာမ...
ရွှေထည်အပါအ၀င် ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ဖိုးခိုးယူခံရမှု ကိုယ်တ...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်ရှင် ဦးတေဇ ပြေးခုန်ပစ်အဖွဲ့ချုပ်...
တာဝန်သိတတ်စွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ဘာကြောင့် အရေြး...
အမုန်းတရားဟောပြောမှု ရပ်စဲဖို့ အစိုးရက ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းက...
မွန်ပြည်နယ်က ကုလားမတောင်တန်း မဖြိုချရန် ဒေသခံများ ...
မူလပိုင်ရှင်တွေ မြေပြန်ရတာ မဆိုစလောက်ပဲရှိသေး (သုံ...
တောင်ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်တို့နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင်ေ...
လိင်ဆက်ဆံပြီး ၃နာရီကြာမှ လိမ်းတာတောင် HIVကို ကာကွယ...
မုံရွာ အ.ထ.က (၁) မြန်မာစာမေးခွန်း မိနစ် ၃၀ နောက်ကျ...
မန်ယူအသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးသွားမယ်လို့ ဝန်...
ပုဒ်မ ၃၇၇ စည်းဝိုင်းကြားက အချစ်နှင့် ခေတ်သစ်ဘဝ
ဘီလ်ဂိတ်ပြောသော အထိနာမယ့် ကျရှုံးမှု
ရန်ကုန်မြို့ လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုအပေါ် အနည်းငယ်စိုးရိမ...
ယူကရိန်းမှာ ရုရှားလိုလားသူတွေနှင့် ယူကရိန်းလိုလားသ...
လမ်းလျှောက်လာသည့် အမျိုးသမီး၏လည်ပင်းမှ ဆွဲကြိုးဖြု...
Camera 360 app အသုံးပြုသူ သန်း ၂၅၀ ကျော်ရှိလာ
Wi-Fi မှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့နိုင်သည့် ကွန်ပျူတာဗိုင်းရ...
Viber အသုံးပြုသူ တစ်ရက်လျှင် ၁ သန်းရှိလာရန် Rakute...
Android Q & A
လေယာဉ်ပျောက်ကို အမေရိကန်က အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာ အဓိကထား...
သီလ၀ါအစုရှယ်ယာများကို လူတန်းစားမျိုးစုံက ၀ယ်ယူနေ
အမျိုးသားတစ်ဦး ရေချိုးခန်းရှိ ရေတိုင်ကီအတွင်း ဦး...
အိမ်ချင်းကပ်နေသူမှ အကြောင်းမဲ့ ရဲဒင်းဖြင့်ခုတ်ခဲ့သ...
တစ်ကမ္ဘာလုံး အင်တာနက်ရရန် Facebook, Nokia, Samsung ...
ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှုး တီထွင်လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံ...
လူသား မျက်လုံးဟာ resolution (megapixel) ဘယ်လောက်ရှ...
Q & A (Education)
ဘောင်းဘီအိပ်ကပ်ကို ဘက်ထရီအဖြစ်ပြောင်းပေးမယ့် Vodafone
ရှာမတွေ့တော့ဘဲ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်ဆုံးသွားတာကို ...
ငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးမှာ မြန်မာစစ်ဘက်ပါဖို့ က...
မလေးရှားလေယာဉ် MH370 ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ
အမျိုးသမီးကတဆင့် အမျိုးသမီး ကူးစက်တဲ့ ရှားပါး HIV ...
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ခြောက်ဖွဲ့ တ...
မဲမသမာမှု မဖြစ်စေရန် အမေရိကန် အကူအညီဖြင့် ရွေးကောက်...
ဂမ္ဘီရဆန်ဆန် ပျောက်ဆုံးနေသော မလေးရှား လေယာဉ် အပိုင်...
အုပ်စုလိုက် တုတ်ဖြင့်ရိုက် ဓားထောက်ကာ ငွေနှင့်လက်စ...
လယ်ထွန်စက်တစ်စီး ကုန်းအဆင်းတွင် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘ...
တရုတ်ပြည်မှာ ဓားကိုင် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အနည်းဆုံ...
မောင်တောမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ခံ ...
ယူကရိန်းနယ်စပ် အနီးထိ ရုရှားစစ်တပ်များ ချထား
ဆယ်တန်းမဖြေဘဲ တက္ကသိုလ်ဆရာမကိုခိုးပြေးတဲ့ ၁၆ နှစ်သား
သကြား ထက် ချိုသော အရာ
ကလေးငယ်တစ်ဦး၏ ခွဲစိတ်ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်ကို ရော်နယ်လ...
အလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် အသက်မေ...
လေယာဉ်ပျောက်ကို မြန်မာ့ရေပိုင်နက်မှာ ရှာတွေ့လေမလား
ဖမ်းချင်ရင်ဖမ်း သံချပ်ကိုတော့ စိစစ်ရေးမတင်နိုင်ဘူး...